WhtasApp မှ၎င်း၏မူကွဲအသစ်နှင့်အတူနေရာလွတ် Androidsis
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းမည်မျှသိုလှောင်သည်ကိုအရေးမကြီးပါ။ The WhatsApp မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်ရရှိသောပုံရိပ်များ၊ ဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်ဖိုင်များကိုပြည့်နှက်စေသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင်ချဲ့ကားပြောဆိုမှုများသည် သိုလှောင်မှုတွင်အကန့်အသတ်ရှိသူများသည်သူတို့၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုအဆက်မပြတ်လျော့နည်းစေသည်။
မကြာသေးမီအချိန်အထိဒီပြိုကျမှုတွေကိုရှောင်ရှားဖို့ကျွန်ုပ်တို့မှာရွေးချယ်စရာတွေရှိခဲ့တယ် ရုပ်ပုံများကိုအလိုအလျောက်ဒေါင်းလုပ်မလုပ်နိုင်စေရန်အတွက် WhatsApp မှရွေးစရာတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်အခြားတစ်ဖက်တွင်, စက်သို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့ပြခန်းကိုသွားနှင့်ငါတို့လိုချင်သောအရာကိုဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။
အမှန်မှာဖြစ်နိုင်ခြေများရှိသော်လည်း WhatsApp ကဒီအလုပ်ကိုလွယ်ကူအောင်ကူညီပေးတယ်။ နောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခြင်း application ၏ထူးခြားချက်မှာလက်ရှိ beta အဆင့်တွင်၎င်းသည်ရွေးချယ်မှုအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ WhatsApp မှထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ဖိုင်များကိုဖျက်ခြင်း.
အဲဒီကတည်းကကြောင်းတစ်ခုခု လွန်ခဲ့သောအချိန်က iOS အသုံးပြုသူများအတွက်ဖြစ်နိုင်ပြီးဖြစ်သည် ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် Android တွင်ပျော်မွေ့နိုင်သည်။ Android သုံးစွဲသူများ၏အကန့်အသတ်မဲ့တောင်းဆိုချက်တစ်ခုမှာ operating system တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ဆောင်နိုင်မှုများမရှိပါ။ ပြီးတော့ WhatsApp ကဒီကိစ္စကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုလုပ်နေတယ်။
အသစ် option ကိုခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် အသုတ်ဖျက်သိမ်း. ဗွီဒီယိုများ၊ ရုပ်ပုံများ၊ အော်ဒီယိုများပင်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ။ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ဖျက်လိုသောဖိုင်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ။ ငါတို့သည်အောက်ပါလမ်းအတွက်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ WhatsApp ကိုလျှောက်ထားပါ ချိန်ညှိချက်များဒေတာနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်းအသုံးပြုမှု> သိုလှောင်မှုအသုံးပြုမှု။ ဒီကနေ element တစ်ခုစီဘယ်လောက်ဘယ်လောက်များများမည်မျှရှိသည်ကိုတွေ့နိုင်ပြီးလိုချင်သော element ကိုရွေးနိုင်သည်။
တစ်ချက်ကြည့် ဖိုင်တစ်ခုစီ၏ပမာဏမည်မျှရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်နိုင်သည် စာသား, အော်ဒီယိုသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများ။ မက်ဆေ့ခ်ျမန်နေဂျာမှမည်သည့်ဖိုင်ကိုသိမ်းဆည်းလိုသည်ကိုရွေးချယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းတွင်နေရာများစွာလွတ်ပေးမည့်ရိုးရှင်းသောချိန်ညှိချက်များဖြစ်သည်။
WhatsApp သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ထိုမွမ်းမံမှုများဤအမျိုးအစားများကိုအလွန်အမင်းတန်ဖိုးထားကြသည်။ အထူးသဖြင့်၎င်းတို့သည်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန်ခွင့်ပြုသည့်လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုတိုးတက်စေရန်အထောက်အကူပြုပါက။ အပလီကေးရှင်းများသိမ်းပိုက်ထားသောနေရာသည်သင်၏စက်ကိရိယာအတွက်ပြaနာတစ်ခုဖြစ်ပါက WhatsApp ကသင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » WhtasApp မှ၎င်း၏မူကွဲအသစ်နှင့်နေရာလွတ်ပါ
LEAGOO KIICAA MIX ကိုယူရို ၁၂၀ အောက်သာရနိုင်သည်